घरमा आएको जुनसुकै पाहुनालाई कहिल्यै पनि नसोध्नुहोस यी ३ प्रश्न! – Ramailo Sandesh
घरमा आएको जुनसुकै पाहुनालाई कहिल्यै पनि नसोध्नुहोस यी ३ प्रश्न!
‘अतिथि देवो भव:’ नेपालमा पाहुनाको लागि यो हरफ बोलिन्छ। यसको मतलब हो पाहुना देवता सम्मान हुन्छ। जब पाहुना घरमा आउँछन तब उनीहरुलाई देवतालाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। पाहुनालाई कुनै पनि समस्या हुन दिनु हुदैन। पाहुनालाई आफ्नो कुनै पनि कुराले असर पर्नु हुदैन। यो हाम्रो परम्परा हो साथै राम्रो व्यक्तित्व हुनुको संकेत पनि हो ।
प्राय सबैको घरमा पाहुना आईरहन्छन्। यदि कोहि तपाईको घरमा पाहुना आएको छ भने उनीहरुलाई कहिले पनि यस्तो प्रश्न सोध्नु हुदैन। सामान्यतय हामी घरमा चिनेको वा नचिनेको पाहुना आउँदा थुप्रै प्रश्न सोधेर उनीहरुलाई हैरान बनाउछौ। व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञका अनुसार घरमा आउने पाहुनाहरूलाई कहिल्यैपनि यी प्रश्न सोध्नुहुदैन।
कोहि मान्छेमा आफ्नो घरमा पाहुना आउने बितिक्कै उनीहरुको शिक्षादिक्षाको बारेमा सोध्ने नराम्रो बानी हुन्छ। हामीले कहिले पनि घरमा आएको पाहुनालाई उनीहरुको शिक्षाको बारेमा प्रश्न सोध्नुहुदैन। पाहुनाले कम पढेलेखेको, कुनै राम्रो संस्थानबाट नपढेको, राम्रो अङ्क ल्याएर पास नभएको वा काम पाईरहेको छैन भने यस्तो प्रश्न सोधेर उनीहरुलाई सानो देखाउनु हुदैन। यस्तो प्रश्नले उनीहरुलाई नराम्रो महसुस हुन सक्छ। तर यी कुराहरु उ आफैले भनिरहेको छ भने केहि फरक पर्दैन।
धेरै जसो मानिसमा ‘नानी-बाबु तिमी एक महिनामा कति कमाउछौ?’ भनेर तलब सोध्ने नराम्रो बानी हुन्छ। उनीहरुको आय जानेर न त हामीलाई केही राम्रो हुन्छ न केहि नराम्रो हुन्छ। यधपी कहिले पनि उनीहरुलाई आय सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोला। त्यसैले घरमा आउने पाहुनालाई कहिल्यै पनि आयको बारेमा नसोधेको नै राम्रो हो।
आफ्नो घरमा आएको साथी, आफन्त र छिमेकीलाई कहिले पनि उनीहरुको धर्म र जातको बारेमा सोध्नु हुदैन। यस्तो प्रश्नले सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। यस्तो प्रश्नले कुनै धर्म वा जात विशेष व्यक्तिलै नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ। त्यसैले यस्तो प्रश्न भुलेर पनि नगर्नुहोला।
लकडाउनबारे यस्तो आयो पछिल्लो अपडेट-